Idiphozithi ye-Forex | Izindlela ezihamba phambili zokufaka i-Forex, Fundisa i-akhawunti yakho Manje nge-FXCC
Idiphozi / Ukuhoxiswa
I-USD, i-EUR, i-GBP Ayikho Imali Ayikho Imali FUND MANJE
Max Imihla ngemihla $ 10000, Maviki $ 25000, Monthly $ 45000
Max kuze kube semali yasekuqaleni exhaswe ngemali
Icubungula Isikhathi: ***
Kungakapheli ihora elilodwa
5-10 izinsuku zokusebenza ukusula
USD Ayikho Imali I-USD: $ 30 - $ 45 FUND MANJE
Max Ayikho imali enkulu
5-7 izinsuku zokusebenza ukusula
USD Ayikho Imali Imali Yasebhange Ehoxisiwe FUND MANJE
Ukuhoxiswa yiBank Wire
3-5 izinsuku zokusebenza ukusula
I-USD, i-EUR, i-GBP Ayikho Imali 2.7% FUND MANJE
Max Umkhawulo wekhasimende lomuntu siqu
I-BTC, BCH, ETH, USDT, PAX Kutholakala kuphela nge-USD Wallet Izimali zemayini Imali yezimayini isetshenzisiwe FUND MANJE
Kungakapheli imizuzu engu-15
I-USD, i-EUR, i-GBP Ayikho Imali Imali Yasebhange Ehoxisiwe FUND MANJE
2-5 izinsuku zokusebenza ukusula
1-2 izinsuku zokusebenza ukusula
* Iyikhokha Imali
Njengengxenye yokuzinikela kwethu okuqhubekayo kumakhasimende ethu, sinikela “Imali ekhokhiswayo engu-zero” ukukhushulwa! Lokhu kusho ukuthi i-FXCC izokhokha imali ekhokhwayo efakwa yiprosesa yokukhokha lapho ufaka imali nathi nganoma yiziphi izindlela zokukhokha ezamukelekayo zeFXCC.
I-FXCC inelungelo lokungayikhokhi imali yakho yediphozithi noma ukubuyisa noma yiziphi izimali ezidiphozithi ezikhokhwe yiFXCC ngezimali zakho uma kutholakala noma iluphi uhlobo lokuhlukumeza oluphathelene “Imali ekhokhiswayo engu-zero” ukukhushulwa.
** Imikhawulo kufanele iguqulwe ibe yimali efanayo ngokususelwa esilinganisweni sokushintshana nsuku zonke
*** Kucutshungulwa Ngezikhathi zomsebenzi ezijwayelekile zebhizinisi
Ngena ngemvume bese ukhokhe i-Akhawunti Yakho NgeZERO Imali
Njengengxenye yokuzinikela kwethu okuqhubekayo kumakhasimende ethu, sinikezela ngokunyusa “imali yediphozithi”!
Awubhalisiwe Noma kunjalo? BHALISA MANJE
Izinqubomgomo zezinkampani ze-FXCC
Inani lemali kanye nemali yokukhokha izobekwa eceleni ngokwe-akhawunti yakho yokuhweba
Izicelo zokuhoxiswa zizothunyelwa ngendlela efanayo izimali ezitholiwe futhi kuze kube sezindleko zokuqala ezibekiwe. Izinzuzo zizohoxiswa ngokusebenzisa i-Bank Wire Transfer
Inani lemali yokuhoxisa elincane yenkampani ngayinye indlela i-$ 50 ngaphandle uma kuchazwe ngenye indlela kuthebula elingenhla
Imingcele encane yokufaka idiphozi ingamanani alandelanayo. Ama-deposit wokuqala awenziwe nge-FXCC kufanele acabangele uhlobo lwe-akhawunti oludingekayo ubuncane
Ngezinye izindlela zokukhokha, i-FXCC ayifaki inani eliphezulu lediphozi. Noma yimiphi imibuzo lokhu kufanele kuhlolwe nomhlinzeki wendlela yokukhokha
Ukubuyiswa inqubomgomo: Zonke izinkokhelo ezenziwa kwi-akhawunti yeKhasimende zibhekwa njengokugcina futhi zingabuyiselwa. Konke ukuhoxisa kumele kwenziwe kusetshenziswa inqubo yokuhoxa yoMnyango Wezezimali we-FXCC. Uma kwenzeka idiphozi yenqatshwa yi-FXCC noma esimweni esehlukile, ukubuyiselwa kwemali kungenziwa ngesicelo esivela enhlanganweni yeKhredithi / iDebit Card, kwiKhredithi / iDebit Card lapho kwenziwa khona idiphozi